काँग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङको निधन::netpatrika
काँग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङको निधन
पार्टीको झण्डा तीन दिन झुकाइने
१६ मंसिर, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका नेता भीमबहादुर तामाङको ७८ वर्षको उमेरमा शनिवार विहान निधन भएको छ ।
हृदयघात भएपछि उपचारका लागि बिहान पौने ९ बजे थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएका तामाङलाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । २०५४ सालदेखि नै कांग्रेसका नेता एवं कानुनबिद् राधेश्याम अधिकारीको थापागाउँस्थित घरमा बस्दै आउनु भएका तामाङले अचानक असहजता महशुस गरेपछि बिहान सवा आठ बजे अधिकारीले नर्भिक अस्पताल पुर्‍याउनु भएको थियो । अधिकारीका अनुसार तामाङको अस्पताल लैजाँदै गर्दा ज्यान गएको हो ।
नियमित मर्निङ वाकबाट फर्किएपछि हृदयघात भएको बताइएको छ । निधनको खबरपछि विहानै कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्र निष्ठावान र आर्दश नेताका रुपमा चिनिने तामाङ सादा जीवनशैलीका लागि चर्चित थिए । नेता तामाङ नेपाली कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि स्वन्तत्र उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । उहाँको पार्थिव शरिरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिएको छ ।
को हुन भीमबहादुर तामाङ ?
भीमबहादुर तामाङ पाँच दशकसम्म नेपाली काँग्रेसमा काम गरिसकेको काँग्रेस नेता हुन् । तामाङको दोलखा जिल्लाको झुलेमा वि.सं. १९९१ मा जन्मनुभएको हो । २०१४ सालमा पार्टी प्रवेश गर्नुभएका उहाँले २०१७ सालको राजा महेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिई लोकतन्त्र खोसेपछि सुबर्ण शमशेरले चलाएको सशस्त्र कान्ति र २०२८ सालमा बिपीको आव्हानमा भएको क्रान्तिमा बन्दुक बोकेर युद्धमा होमिनुभएको थियो ।
तामाङले २०३६ र २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि सक्रिय हुनुभयो । सुरुदेखि नै आन्दोलनमा होमिनुभएका उहाँ २०६२/६३ को जनआन्दोलन भाग २ मा पनि सडक ओर्लिएका थोरै बृद्ध नेताहरुमध्येका एक हुनुहुन्छ । बिपी कोइरालासँगै लामो समयसम्म भारत निर्वासमा रहनुभएका उहाँ २०३६ सालको जनमतसंग्रहपछिमात्र नेपाल र्फकनुभएको थियो । नेता तामाङले काठमाण्डौमा भएको १२ औँ महाधिवेशनमा सभापति सुशील कोइराला, शेरवहादुर देउवासंगै सभापति पदका लागि उम्मेदवारी पनि दिनुभएको थियो ।
उक्त महाधिबेशनबाट सभापति भने सुशील कोइराला चयन हुनभयो । कोइरालाले १ हजार ६ सय ५२ मत ल्याउनुभएको थियो । तामाङले भने ७८ मत मात्र ल्याएर पराजित हुनुभएको थियो । तामाङले प्रारम्भिक शिक्षा दार्जिलिङमा पुरा गर्नुभएको हो । बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजबादलाई मुल सिद्धान्त मान्ने उहाँ व्यवहारमा गान्धीबादी मानिनुहुन्छ । उहाँको सादा जीवन, सरल र पारदर्शी जीवनशैली काँग्रेसवृत्तमै नमुनाका रुपमा लिइन्छ । कर्मशील तामाङ बगैचा हेरचाहमा रुचि राख्ने गर्नुभएको थियो ।
काँग्रेसले तीन दिन पार्टीको झण्डा झुकाउने
यसैवीच नेपाली काँग्रेसले तामाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । शनिवार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक वैठकले तामाङको निधनवाट पार्टीलाई अपूरणिर्य क्षति पुगेको र तामाङजस्ता नेताको अभाव खड्कीरहने निष्कर्ष निकालेको छ ।वैठकले पार्टीको झण्डा तीनदिनसम्म आधा झुकाउने, तीनसम्ममा औपचारिक कुनै कार्यक्रम नगर्ने तथा १३ औँ दिनको पुन्य तिथीका दिन ७५ जिल्लामै शोकसभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।